Kenya Oo Gudbisay Caddeymo Badda Ah
Xeer ilaaliyaha qaranka Kenya Githu Muigai
Kenya waxa ay dooneysaa in arrinta la xiriirta muranka badda lagu dhammeeyo si ka baxsan maxkamadda, sida wada-hadal.
Dowlada Kenya ayaa Guddiga Xadaynta Qalfoofka Badda ee QM u gudbisay caddymo la xariira muranka xuduudda dhinaca badda ee kala dhexeeya Soomaaliya.
Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in caddeymahan oo uu xeer ilaaliyaha qaranka Kenya Githu Muigai u gudbiyey guddigan fadhigiisu yahay magaalada New York, ay yihiin xog la ururiyey toddbadii sano ee tagtay.
Dowladda Kenya waxa ay dooneysaa in xadka badda uu ahaado sida ay ayada u dooneyso oo ah in calaamadda xadka loo soo qalloociyo dhinaca Soomaaliya, halka Soomaaliya ay ku doodeyso in caalamadda xadka ee dhulka iyo tan badda ay isla socdaan.
Kenya waxa ay horey u sheegtay inaysan sax ahayn dacwadda ay Soomaaliya u gubisay maxakamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland, waxayna dooneysaa in arrintan lagu dhammeeyo si ka baxsan maxkamadda.
Wargeyska iyo warbixinta uu qorey ayaa Sahra Cabdi Axmed waxaa ay ka wareysatey wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere, si faahfaahin uu uga bixiyo arrintan.
Dhageyso wareysiga Yaasiin
Soomaali U Dhintay Weerarkii Sweden
Soomaali Ka Mid Noqday Golaha Oslo
Shil Ka Dhacay France Oo Dilay 42 Qof
Clinton Oo 11 Saacad Su'aalo La Weydiiyey